नारायणहिटी दरबारमा विध्वंसकारी घटना भएको यसअघि नै थाहा भइसकेको थियो । न्यूरोसर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटालाई सेनाको जीपले थापाथली नर्भिक अस्पतालबाट हतार–हतार छाउनीस्थित सैनिक अस्पताल पुर्‍यायो । त्यहाँ पुग्दा उनले लामबद्ध लासहरूको थुप्रो देखे । खरानी वर्ण भइसकेको एक लासको छातीमा साईबाबाको लकेट झुण्डिएको थियो ।
डा. देवकोटाले दोहाेर्याएर हेर्दा पो थाहा पाए, त्यो लास राजा वीरेन्द्रको रहेछ । श्रुतिको सास भने अझै बाँकी थियो । यसैबीच डा. देवकोटा माथि शल्यकक्षमा पुगेर युवराज दीपेन्द्रलाई बचाउन जुटे र आफ्नी पत्नी डा. मधु देवकोटा (दीक्षित) लाई मोबाइलमा फोन गरी यो कुरा बताए । केही समयपछि नै मधुको फोन आयो–